TAXANAHA FALANQEYNTA SUUQA: Mustaqbalka Kelechi Iheanacho, Duulaanka Barcelona ee Hector Bellerin, Shanta Xidig Ee Ugu Waaweyn Kuwaasi Oo Heshiiska Saxiixooda Lagu Guul Dareystay, Iyo Qodobo Kale Oo Xiiso Leh – Kooxda.com
Home 2017 June Champions League, Europa League, France, Ingiriiska, Italy, Jarmalka, Spain, Suuqa, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino TAXANAHA FALANQEYNTA SUUQA: Mustaqbalka Kelechi Iheanacho, Duulaanka Barcelona ee Hector Bellerin, Shanta Xidig Ee Ugu Waaweyn Kuwaasi Oo Heshiiska Saxiixooda Lagu Guul Dareystay, Iyo Qodobo Kale Oo Xiiso Leh
Asalaamu caleykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Akhristayaasha sharafta lahoow kusoo dhawaada barnaamijkeena Falanqeynta Suuqa ee usbuucan oo aynu kusoo qaadan doono qodobo xiiso leh.
Barnaamijkeena ayaynu usbuuc kasta ku faaqidnaa taxliilaadka suuqa kala iibsiga ciyaartoyda iyo falanqeyn ku saabsan macquulnimada ay xisiguhu ugu wareegi karaan kooxaha. Waxaa kale oo aynu ku faaqidnaa xidigaha ku haboon kooxaha waaweyn inay keensadaan iyo fursadaha
Kelechi Iheanacho Ma Sii Joogi Doonaa Etihad Stadium??
Tababaraha kooxda West Ham ee Slaven Bilic ayaa ku qasban inuu xilli ciyaareedkan fooda inagusoo haya kooxdiisa dhiso, isla markaana uu kasoo kabto hoos u dhicii ku yimid xilli ciyaareedkii hore.
Si kastaba ha ahaatee da’yarka Manchester City ee Kelechi Iheanacho ayaa aad loola xiriirin inuu usii jeedo dhinaca Olympic Stadium.
20 jirkan ayaa qaab ciyaareed cajab leh muujiyay xilli ciyaareedkii 2015/16, markaasi oo uu ka hoos ciyaaray tababare Manuel Pellegrini. Wakhtigaasi wuxuu saftay 29 kulan tartamada oo dhan isaga oo 7 jeer shabaqa soo taabtay, caawiyena ka noqday 3 kale. Hadaba Pep Guardiola ayaa xidigan u arkay inuu ka maarmay isaga oo aan ku darsan qorshihiisa xilli ciyaareedkii hore.
Sida lasoo werinayo Kelechi ayaan kusii negaan doonin Etihad Stadium waxaana xiiseynaya kooxaha BVB iyo PSG. Lkn xidiga oo xiiseynaya inuu sii joogo Horyaalka Ingiriiska ayaa wadada u furaysa inay West Ham noqoto kooxda ugu cadcad uguna baahida badan la wareegista da’yarkan.
Muxuu Iheanacho kusoo kordhin karaa kooxda reer London?
Da’yarkani waa gooldhaliye halis badan wuxuuna awoodaa inuu kubada u jiito qaabka uu doono. Waa nooca ciyaartoy ee ay u baahantahay koox sida West Ham oo kale ah. Waa wiil daafaca kala diri kara, kubada qaabeyn kara isla markaana fursad ka heli kara safka West Ham.
West Ham halista kaliya ee ay haysato waa Andy Carrol iyo Micheal Antonio sidaas darteed Iheanacho wuxuu kusoo kordhin karaa cudud muuqata oo ay labadan nin ku howl galaan.
Hadii xataa Slaven Bilic uu keydka kusoo gashado Ihenacho waa xidig ciyaarta dhan bedeli kara kana faa’iideysta fursadaha ciriiriga ah.
Ugaarsiga Barcelona Iyo Milicsiga Taariikhda Hector Bellerin
Xubintan waxaan ku eegi doonaa daafaca Arsenal ee Hector Bellerin kaasi oo aad loola xiriirin kooxda Barcelona.
Xagee ayuu ka yimid birlabta daafaca Arsenal ee Hector Bellerin?
Bellerin wuxuu kasoo baxay akaadeemiyaha Kaatalooniga ee loo yaqaano La Masia Academy isaga oo markaasi 16 jir ahaa. 2011kii ayuu da’yarta Arsenal usoo wareegay lkn sadexdii sano ee xigtay magiciisa lama maqal wuxuuna u ciyaari jiray da’yarta hoose. Intaas kadib wuxuu wakhti yar amaah kula qaatay kooxda Watford.
Xidig yarahan ayaan la aqoon magiciisa wixii ka horeeyay xilli ciyaareedkii 2014/15. Xilli ciyaareedkaas Bilowgiisa Bellerin waxay u aheyd wel-wel iyo walaac sababtoo ah macallin Arsene Wenger ayaa $12 Milyan kulasoo wareegay Mathiu Debuchy oo ka ciyaara baasha midig ee daafaca. Sidoo kale wuxuu isla wakhtigaasi Wenger lasoo saxiixday Colum Chambers kaasi oo rikoor $16 Milyan ah ay Arsenal ka bixisay. wuxuuna Chambers noqday daafacii ugu qaalisanaa ee ay Arsenal soo iibsato abid.
Bellerin wuxuu noqday dookha sadexaad ee baasha midig maadaama laba xidig oo kale lacag qaali ah lagusoo iibsaday. Waxaa isla wakhtigaas kooxda ka tagay Bacary Sagna oo isagana u wareegay kooxda Manchester City. Waxaa yareyd rajada ah inuu Bellerin kasoo muuqdo safka koowaad ee kooxda Gunners.
Bishii January ee sanadii 2015 ayuu Debuchy ku dhaawacmay kulan ay kooxdiisu la ciyaartay Stoke City. Intaas kadibna Chambers ayaa loo arkay inuu daafaca midig kasoo bixi karin waxayna fursad u noqotay Hector Bellerin.
Debuchy wuxuu garoomada ka maqnaa mudo 3 bilood ah. Mudadaas yar ayaa fursad u joqotay Bellerin wuxuuna ku guuleystay inuu Dego qalbiyada Emirates.
Koboca iyo horumarka Bellerin kasokow, Barcelona ayuu kasoo yeerayaa war falaar ku ah guud ahaan kooxda Arsenal. Way sahlantahay koox Barcelona oo kale ah inay tashkiiliso xidig Bellerin oo kale ah. Qiimaha lacagaha ay usoo ban dhigayaan, Guulaha ay gaarayeen sadahan danbe, Xidigaha jooga Barcelona iyo waliba mushaharaadka Camp Nou ayaa sabab u noqon kara in Bellerin uu ka jeedsado qalbiyadii uu labo sano kahor hantiyay.
Waxaan shaki ku jirin inay Barcelona awood uleedahay inay la wareegaan Hector Bellerin sidii ay horay ugu dhib yaraatay inay inay la wareegaan kabtankii Arsenal(Fabregas) .
Yaa Bedelaya Bellerin Hadii Uu Ka Tago Arsenal?
Arsenal waxay u dhowdahay inay ka maaranto Bellerin sidii ay horay uga maarantay xidigo waaweyn oo isaga lamid ahaa.
Jenkinson iyo Gabriel ayay labaduba noqon karaan bedelka booska daafaca midig ee Bellerin.
Sido kale Waxaa yaab leh inuu Oxlade-Chamberlain uu buuxin karo booska Bellerin marka taaktikada loo bedelo 3-4-2-1. Xilli ciyaareedkii dhamaaday ayuu Chamberlain kasoo muuqday booskan wuxuuna u muuqday faras aan daalin oo ka xamaalan kara baal danbeedka midig.
Si kastaba ha ahaatee Bellerin ayaa kalsooni ku abuuray jamaahiirta Gunners kadib markuu wararka xanta ah ee Barcelona la xiriirin ku gacan seyray isaga oo bartiisa Twitterka uga fal celiyay.
Iska Ilow Zlatan Ibrahimovic, Waa Kuwan Sadex Bar Tilmaameed Oo Ay Tahay Inay Man United Diirada Saarto
Bilowgii xilli ciyaareedkii tagay, Man United waxay aheyd kooxaha ugu cadcad hanashada horyaalka, lkn natiijooyin xunxun ayay dib kala kulmeen iyaga oo ugu danbeyn juhdigoodii gaari waayay inay ku dhameystaan afarta kaalmood ee ugu sareysa horyaalka.
Walaacii ay shayaadiinta cascas ka qabeen inay Champion-ka seegaan ayaa baaba’ay kadib markii ay ku guuleysteen koobka Europa League, taas ayaa la micno ah inay Red Devils sanadka danbe kasoo muuqan doonaan tartanka dahabiga ah ee Champions League.
Walow Zlatan Ibrahimovic uu ahaa gool dhaliyaha ugu goolasha badan Manchester United xili ciyaareedkii tagay, hadana wali waxaa jira dhibaatooyin dhinaca weerarka ah oo u baahan in la xaliyo.
Shabakada BBC ayaa xaqiijisay in joog dheeraha reer Sweden aan laga saxiixi doonin heshiis cusub, lkn war sidaha The Independent ayaa isaguna sheegaya in xidigan uu baaqi kusii noqon doono Old Trafford.
Hadaba barnaamijkeenan usbuuclaha ah ayaan maanta kusoo qaadanaynaa sadex xidig oo ay tahay inay Man United diirada saarto si ay u caliyaan dhibaatadooda dhinaca weerarka ah.
Wiilkan reer Talyaani ayaa kamid ah gool dhaliyayaasha ugu halista badan qaarada yurub wakjti xaadirkan. Kooxo badan ayaa lala xiriirin xidigan lkn naadigiisa Torino ayaa iyagu aduun badan dul dhigay.
Iyadoo la filayo in Zlatan uusan xilli ciyaareedka danbe sii joogi doonin Manchester United, ayay tahay in Jose Mourinho uu sameeyo saxiix weyn. Hadaba Andrea Belotti ayaa noqonaya xidigaha bedeli kara Zlatan Ibrahimovic iyo dookha ugu wanaagsan weerarka Old Trafford.
Xidigaha la filayo inay aad ugu dhowyihiin u wareegista Man United waxaa kamid ah Alvaro Morata.
Weeraryahanka reer Spain ayaan boos joogta ah ka haysan kooxda Real Madrid ee Macallin Zidane.
Xisigan waxaa aad loola xiriirin AC Milan lkn waxaa sidoo kale jira warar la xiriirinaya Manchester United.
Hadii ay rumowdo inuu xidigan yimaado Old Trafford, wuxuu noqon bedelka rasmiga ah ee Zlatan Ibrahimovic.
3. Alexandre Lacazete
Xidigan heerka caalami ee reer France ayaa si weyn ugasoo dhex muuqday kooxdiisa AS Lyon isaga oo muujiyay sida uu u yahay ciyaartoy lagu dagaalamo.
Kooxda Atletico Madrid ayaa diyaar u aheyd saxiixa xidigan lkn ganaax dhanka suuqa oo lagusoo rogay awgeed lamasoo wareegi karaan xidigan.
Waxey fursad weyn u tahay Manchester United inay Xidigan ka dhigtaan bedelka Zlatan.
Maxaad ka Ogtahay Shan Saxiix Oo Ugu Waaweyn Kuwaasi Oo Lagu Guul Dareystay Iyaga Oo Koox Kale U Dhow
Bfg 18 Beri ayaa ka dhiman in la furo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxaana jira xidigo tiro badan oo lagu wareegayo.
Arsenal ayaa si xor ah usoo ugaarsatay xidig kamid ahaa xidigihii kasoo muuqday kooxdii ugu wanaagsaneyd Bundesliga xilli ciyaareedkan, xidiga Monaco ee Mbappe ayaa kiyuu loogu jiraa iyaga oo macallimiinta Yurub ugu waaweyn ay xiiseynayaan, Mourinho ayaa jawaab cajab leh ka bixiyay mustaqbalka goolhaye David De Gea, liverpool-na waxay raali galin ka bixiyeen afduubashada daafaca Southampton.
Si kastaba ha ahaatee, waalidii suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ayaa bilaabmaysa waxaana durba la dheelayaa banooni xiiso badan oo ku saleysan lacag iyo magac hadba midkii xidigaha tayada leh lagu heli karo.
Hadaba waxaanu barnaamijkeenan kusoo qaadanaynaa shanta xidig ee ugu waaweyn kuwaasi oo saxiixdooda inuu dhameys tirmay loo maleeyay kadibna guul dareestay.
1. Gonzalo Higuan➡Arsenal
Dhab ahaantii, Way adkeyd in la ogaado xaqiijinta saxiixa Higuan ee Asenal. Saxaafadu waxay kusoo gabo gabeysay inuu Higuan dhameeys tiray ku biiritaankiisa Arsenal.
Saxaafada ayaa isla dhex maraysay booska uu Higuan uga ciyaari doono Arsenal iyo shaxda uu Wenger kusoo gali karo markan, kuwo kale ayaa funaanada Arsenal usoo xiray Higuan, halka jamaahiirta qaarna ay Twitter-ka soo dhaweyn kusoo qoreen.
Ugu dambeyn Wenger ayaa hal mar ka noqday go’aanka uu kulasoo wareegi lahaa Higuan wuxuuna diirada u jeediyay Suarez isaga oo ugu danbeyn ku guul dareestay labadaba.
Kadib Higuan ayaa u wareegay Napoli isaga oo magiciisa ku qoray 71 Gool, 104 kulan oo uu u saftay kooxdan, halka Gunners ay weli sugayaan xidig isaga lamid ah oo sidi Van Persie ugu hagar baxa.
2. David De Gea➡ Real Madrid
Goolhayaha dahabiga ah ee kooxda Man United, ninka reer Spain ee lagu magacaabo David De Gea ayaa sanidihii u danbeeyay ahaa xidiga ugu muhiimsan kooxda Manchester United.
Kooxda Real Madrid ayaa u waalatay inay ka dhabeeyaan riyadooda aheyd inay goolhayahan kasoo dajiyaan Santiago Bernabue, hase yeeshee riyadaasi waxaa beeniyay mashiinka Faxga oo ka xumaaday.
Maalintii ugu danbeysay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ayay Real Madrid isku dayeen inay dhameys tiraan saxiixa xidigan lkn saacadii ugu danbeysay suuqa kala iibsiga ayay Man United ogaysiisay inaysan warqadihii heshiiska iibka helin sababtoo ah Mashiinkii Fax-ga ayaa ka xumaaday.
Labada kooxood ayaa dagaalkii sadexaad ee dunida hawada isku mariyay iyada oo midba midka kale ku eedeeyeen inay heshiiska ka baxeen.
Ugu danbeyn De Gea ayaa qandaraas cusub u saxiixay United wuxuuna kamid noqday shabaqa ilaaliyayaasha ugu mushaharka badan yurub.
3. Robinho➡ Chelsea
Robinho wuxuu kamid ahaa xidigaha ay Manchester City isku bartay caalamka iyaga oo muujiyay inay lacag kula tartamayaan kooxaha waaweyn iyo saxiixyada waaweyn.
Robinho intuusan ku biirin Man City wuxuu diirada u saarnaa kooxda Chelsea oo uu markaasi hogaaminayo tababare Philipe Scholari. Hase yeeshee kooxda Real Madrid ayaan diyaar u aheyn inay dhigeeda Chelsea ka iibiyaan xidigan sababtoo ah waxey isaga hor imaan kareen tartanka Champions League.
Dhibaatadu waxay bilaabatay kadib markii ay Chelsea si khalad ah usoo saartay maaliyada Robinho ee chelsea oo suuqa loo iib geyn doono. Tani waxey cadho galisay maamulka Madrid oo ka dhago adeygay inay wada hadalada dhameys tiraan. Ugu dambeyna xidigan reer Brazil ayaa ku biiray kooxda Man City.
Robinho wuxuu ahaa xidigii ugu horeeyay ee rikoorka lacag intaas le’eg ay Manchester City ka bixiso iyo waliba saxiixii ugu weynaa ee ku guul dareysta inuu kasoo muuqdo Etihad.
Ugu danbeyn wax saameyn ah wuu ku yeelan waayay kooxda kadibna waxaa amaah loogu diray kooxda reer Brazil ee Santos isagoo ugh danbeyn u wareegay AC milan.
4. John Obi Mikel➡Manchester United
Nigerian-kan oo 19 jir ah ayaa saxaafada soo hor fariistay isaga oo xiran maaliyada Manchester United wuxuuna yiri, “waxaan ku faraxsanahay inaan helo fursad aan ugu ciyaaro mid kamida kooxaha ugu waaweyn caalamka”
Morgan Anderson oo ka tirsanaa kooxdii markaas iibisay Mikel ayaa yiri Sir Alex Ferguson ayaa ii sheegay in John Obi uu noqon doono Roy Keane-ka cusub ee Man United.
Ugu danbeyn sheekooyin mugdi kujiro, taleefano sir ah iyo afduubasho aan geedna loogusoo gaban ayay Chelsea ku qaaday xidigan. 10 beri kadibna Mikel ayaa sheegay in saxiixa Man United lagu qasbayay oo uu markiisa horeba rabay inuu Chelsea u wareego.
Sixirkan waxaa ka danbeeyay kadib markii ay Chelsea lacag $4 milyan ah siisay Lyn oo ah kooxduu Mikel joogay iyo $12 oo ay siiyeen Man United.
Ugu danbeyntii Mikel ma uusan noqonin Roy Keane-kii cusbaa lkn mar kastaba wuxuu ahaa xidig ku weyn quluubta Chelsea isaga oo 10 sano u adeegay Blues. Ugu danbeyn sanadkii hore ayuu u wareegay horyaalka China.
5. Steven Gerrard➡Chelsea
July, 2005 ayay aheyd markii fajac iyo amakaag ay u go’een taageerayaasha Liverpool kadib markii Jose Mourinho uu damcay inuu Gerrard ku qanciyo inuu Chelsea ka ciyaaro.
Ugu danbeyn Jose wuxuu dadaal u galay inuu Gerrard usoo wado Stamford Bridge wuxuuna ku qanciyay xidiga inuu qalbgiisa usoo jeediyo galbeedka London.
Taageerayaasha Liverpool ayaa xanaaqay, shaashadaha hortooda ayay wadooyinka ku gubeen maaliyada Kabtankooda, waxaana yaraatay kalsoonida lagu qabo Steven Gerrard.
Garoonka iyo tababarkaba taageerayaasha ayaa ku mudaharaaday Gerrard, ugu danbeyntii wuxuu qirtay inay su’aalo hor yaalaan maadaama ay tababaraha kooxda ee wakhtigaas xaaladu ku xumeyd.
Wax yar kadib waxaa kooxda tababare looga dhigay Rafa Benitez kaasi oo ku guuleystay inuu Gerrard ku qanciyo joogitaanka Anfeild.
Gerrard wuxuu kamid noqday halyeeyada ugu waaweyn kooxda Liverpool isaga oo 10 sano oo danbe baaqi kusii ahaa Anfeild.
Walow uusan koobab tiro badan kula guuleysan kooxda Liverpool hadana badhaadhaha ugu weyn ee uu la gaaray wuxuu ahaa koobkii Champions League ee Istanbul.
Iska Ilow Benjamin Mendy, Waa Kan Bedelka Clichy ee Man City
Kooxda Manchester City ayaa aad loola xiriirin saxiixa baal dambeedka midig ee kooxda AS Monaco wiilka lagu magacaabo Benjamin Mendy, hase yeeshee falanqeeyayaasha suuqa ayaa ku sheegaya in Ryan Bertrand uu Man City uga haboonyahay xidigan waa marka labada xidig la isbarbar dhigo e.
Ryan Bertrand waa danbeed bidix oo awood u leh inuu ordo masaafo badan isla markaana awood uleh daafacashada. Wuxuu sidoo kale khibrad uleeyahay horyaalka ingiriiska isaga oo 6 sano ka ciyaaray. Kooxda Chelsea ayuu daafacani horay ugusoo ciyaaray haatana wuxuu ku suganyahay kooxda Southampton.
Tayooyinka xidigan uu ugu haboonyahay Manchester City waxaa kamid ah:
Xidigan qaab ciyaareedkiisa waa mid joogta ah mana aha xidigaha inta badan dhaawaca u nugul.
Hadii xataa aysan Man City diirada saarin waa xidig kasoo bixi lahaa booska ay u baahanyihiin.
Boos Qaadashada Daafacnimo
27 jirkani wuxuu ku takhasusay boos qaadashada daafacnimo. Ma dhacdo Bertrand oo booskiisa baneeya hadii ay dhacdana waa naadir.
Wuxuu leeyahay muruq iyo awood uu ku wajaho xidigaha xoogan.
Qiimaha uu Ku Joogo Man City
Ryan Bertrand waxaa lagu qiimeeyaa $12 milyan. Waa qiimo aad u raqiis ah marka loo fiiriyo tayadiisa iyo waxa uu kusoo kordhin karo Muwaadiniinta.
John Stones oo $50 Milyan laga bixiyay ayaa la ogaa waxqabadkiisa liitay, balse Ryan Bertrand waxqabadkisa ayaa ka sareeya qiimihiisa.
Si kastaba ha ahaatee tababare Pep Guardiola ayaa u baahan tabar ku qancisa inuu lasoo wareego Ryan Bertrand si uu xilli ciyaareedkan uga mid noqdo kooxaha ku dagaalama horyaalka iyo Champions League.
Waxaan ahay xidig kasoo ciyaaray La Liga iyo Premier League. Qarankeyga Waxaan u saftay 62 Kulan. Waxaan ku guuleystay koob aduun, UEFA Europian Champiomship, FIFA Confederation Cup, Champions League, Premier League, La Liga Iyo Copa Del Rey. Kooxdeyda haatan waxaan ugusoo wareegay aduun dhan £19 Milyan Oo Euro. Kumaan ahay?
Akhriste kasta oo ka jawaaba su’aashan waxaan ku xusi doonaa barnaamijkeena usbuuca danbe hadii Eebe idmo.
16 thoughts on “TAXANAHA FALANQEYNTA SUUQA: Mustaqbalka Kelechi Iheanacho, Duulaanka Barcelona ee Hector Bellerin, Shanta Xidig Ee Ugu Waaweyn Kuwaasi Oo Heshiiska Saxiixooda Lagu Guul Dareystay, Iyo Qodobo Kale Oo Xiiso Leh”
Donza salaad ibrahim July 12, 2017 at 9:35 pm · Edit
barce bwoy June 28, 2017 at 12:54 pm · Edit
waa Pedro Rodriguez lkn koobab kiisa waxa ka maqan super copa spaná , club world cup, UEFA super cup
H B 4 June 16, 2017 at 2:11 pm · Edit
1= MAN UTD- Wuxuu la qaaday Premier League 2008
2= BARCA- Wuxuu la qaaday LA LIGA,DEL RAY & UCL- waxayna kala soo wareegtay Man Utd xilli ciyaareedkii 2008-2009 adduun dhan 19 Milyan.
3= SPAIN- Wuxuu la qaaday World Cup 2010, EURO 2012 & Conferation Cup 2013
maxamud cabdi June 14, 2017 at 3:06 pm · Edit
waaa pedro rodriges
Van dide June 13, 2017 at 12:05 pm · Edit
hadi an isku dayo jawabtu
waa farnando Torres
mazut junior June 13, 2017 at 11:56 am · Edit
Joker June 13, 2017 at 5:42 am · Edit
Warsame warfa June 13, 2017 at 1:04 am · Edit
Khalid Zaki June 12, 2017 at 11:50 pm · Edit
Pedro Rodriguez Chelsea player currently now
Bashiir hussein sh June 12, 2017 at 11:32 pm · Edit
Asc magacu wa bashiir hussein sh hassan jogo dyqshd haddan isku dayo su’aasha jawabteeda wa Shourle
Isba June 12, 2017 at 10:00 pm · Edit
Magacaygu waa Ibrahim xasan oo joogo kaaraan jawaabta waa Pedro
farhan June 12, 2017 at 9:31 pm · Edit
abdi ali geele June 12, 2017 at 7:51 pm · Edit
yacqub hudi June 12, 2017 at 6:45 pm · Edit
ciyaryahankaas wa pedeo rodrigues
Muscab June 12, 2017 at 6:44 pm · Edit
boom boom June 12, 2017 at 6:12 pm · Edit